निजामती सेवामा आरक्षण र यसको प्रभाव « प्रशासन
प्रकाशित मिति : 19 November, 2018 7:00 am
समावेशीकरणका दुई प्रमुख साधन सकारात्मक विभेद र आरक्षण हुन् । आरक्षण भनेको सकारात्मक विभेदका विभिन्न साधनहरूमध्येको एक प्रमुख साधन हो । तसर्थ, समावेशीकरणको सन्दर्भमा यी दुवैलाई सँगसँगै प्रयोग गरिने भएकाले एक-अर्काको पर्यायका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छन् । तथापि यी दुईबीच केही भिन्नता भने अवश्य छन् । प्रमुख भिन्नताहरूलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ
सकारात्क विभेद आरक्षण
आरक्षणभन्दा सकारात्मक विभेदको अवधारण बृहत हुन्छ । आरक्षण सकारात्मक विभेदकै एक विशेष साधन हो । तसर्थ सकारात्मक विभेदको तुलनामा यो संकुचित अवधारणा हो ।
सकारात्मक विभेदले सक्षमता तथा प्रतिनिधित्व दुवै बढाउनमा जोड दिन्छ । आरक्षणले प्रतिनिधित्व बढाउनमा मात्र जोड दिन्छ ।
यसले गुणात्मक समावेशीकरणमा जोड दिन्छ । यसले संख्यात्मक समावेशीकरणमा मात्र जोड दिन्छ ।
सकारात्मक विभेद बाध्यात्मक नहुने भएकोले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन । आरक्षण बाध्यात्मक हुने भएकोले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ ।
सकारात्मक विभेद दीर्घकालको लागि ठीक हुन्छ । आरक्षण अल्पकालको लागि ठीक हुन्छ ।
सकारात्मक विभेदको लक्ष्य समानता कायम गर्नु हो । आरक्षणको लक्ष्य समता कायम गर्नु हो ।
सकारात्मक विभेद आयुर्वेदिक औषधिजस्तै विस्तारै असर गर्ने तर साइड इफेक्ट कम गर्ने हुन्छ । आरक्षण एलोपेथिक औषधि जस्तै छिटो असर गर्ने तर साइड इफेक्ट गर्ने हुन्छ ।
सकारात्मक विभेदले योग्यता प्रणालीमा असर गर्दैन । आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा असर गर्न सक्छ ।
सकारात्मक विभेद विकसित/अविकसित सबैतिर प्रयोग गरिन्छ । आरक्षण मुख्यरूपमा अविकसित देशमा प्रयोग गरिन्छ ।
वास्तवमा आरक्षणको व्यवस्थाले आरक्षित समूहमा मात्र लक्षित वर्ग सफल भएका नभएर खुला तथा अन्य समूहमा पनि उल्लेख्य संख्यामा सफलता हात पारेको देखिन्छ । वास्तवमा यो व्यवस्थाको कारण उनीहरुमा लोक सेवा आयोगको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न ठूलो हौशला प्रदान गरेको छ, उत्प्रेरण दिएको छ । आ.व. २०६७/६८ देखि आ.व. २०७४/७५ को आठ वर्षमा समावेशी विज्ञापनबाट जम्मा १६ हजार ९ सय ३९ जना उम्मेदवार सिफारिस भएको देखिन्छ भने खुला विज्ञापनहरू तर्फ सोही अवधिमा कुल २४ हजार १ सय २९ उम्मेदवारहरू सिफारिस भएका छन् । यसलाई निम्न अनुसार तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:
निजामती सेवामा सबै बगर्, समुदाय र खासगरी सीमान्तकृत वर्गको आकर्षण अभूतपूर्व रुपमा बढेको छ । आ.व. २०७४/७५ को अवधिमा आन्तरिक प्रतियोगिता तथा खुला विज्ञापन तर्फ अनलाईन दरखास्त प्रणालीमा ५ लाख ६७ हजार ८ सय ५३ गरी कुल ५ लाख ७१ हजार ३ सय २२ दरखास्त प्राप्त भएका छन् । उक्त दरखास्त मध्ये २ लाख ९६ हजार ७ सय ४ (५२ प्रतिशत) महिला र २ लाख ७१ हजार १ सय ४९ (४८ प्रतिशत) पुरुष रहेका छन् । नेपालका ७७ वटै जिल्लाका उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिएका छन् । विगतमा निजामती सेवामा मधेसका जिल्लाको चासो कम हुने गरेकोमा दृश्य फेरिएको छ । अघिल्लो वर्ष सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने ५ जिल्लामा सप्तरी, धनुषा, सिराहा, सर्लाही र महोत्तरी रहेका छन् । विगतमा पहाडका सीमित जिल्ला र जातिको आधिपत्य रहने निजामती सेवामा अहिले सबैको चासो बढ्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिक, सामाजि रुपमा पछाडि परेको वर्गलाई मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिताको हक हुने कुरा उल्लेख भएकोमा आरक्षणको नाममा सम्बन्धित वर्गका टाठावाठा (इलाइट) ले सुविधामा कब्जा जमाएका छन् । महिलाको कोटामा बाहुन, क्षेत्रीकै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रमा उच्च स्थान हाशिल गरेका महिलाले अवशर लिएका छन्, जनजातिका नाममा नेवार, थकाली, गुरुङ्, राई लगायतका जातिले फाइदा लिएका छन् भने मधेसीको कोटामा पनि सदियौं देखि मधेसमा शासन गर्दै आएका झा, यादव, महतो, त्रिपाटीले अवसरमा कब्जा जमाएका छन् । दलित, अपांग, पि.क्षे. तर्फका कोटामा पनि आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेको वर्गभन्दा उक्त समूहका टाठावाठाले नै अवसरमा कब्जा जमाएका छन् । पिछडिएको क्षेत्रको कोटा, अपांगता भएका व्यक्तिको कोटामा त झन व्यापक दुरुपयोग भइरहेको आरोप आउने गरेको छ । खासगरी काठमाडौंमा बसाइसराई गरिसकेका व्यक्तिहरूले पिछडिएको जिल्लाबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, शरीरमा सामान्य कैफियत देखिएका व्यक्तिहरूले समेत अपांगता परिचय बनाएर आरक्षणको सुविधा लिएकोले खास सुविधा पाउनु पर्ने वर्गले अपेक्षा अनुसार यो सुविधा लिन सकेको छैन ।
आ.व. २०७४।७५ मा प्रकाशित विज्ञापनमध्ये १ सय १४ वटा विज्ञापन (कूल १ सय ९३ पद) का लागि सञ्चालित परीक्षामा कुनैपनि उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन सकेनन् । त्यस्तै २ सय ७२ पदका लागि भएका विभिन्न ४० वटा विज्ञापनमा
माग भएभन्दा न्यून संख्यामा (१ सय ३८ जना) मात्र उम्मेद्वार उत्तीर्ण भएका छन् । यसरी कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण नहुने तथा न्यून संख्यामा उत्तीर्ण हुने धेरै विज्ञापनहरु आरक्षणतर्फका भएकोले पदपूर्तिमा कठिनाई सृजना गरेको छ र खर्च समेत बृद्धि गराएको छ ।
यो अल्पकालको लागि ल्याइने भए तापनि लामो समयसम्म निरन्तरताको लागि दबाब पर्ने गरेको छ । जस्तो भारतमा सुरुमा २० वर्षको लागि सूचीकृत जाति तथा समुदायको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोमा हाल उक्त अवधि बढाउदै गई ७० वर्ष पु¥याइएको छ । नेपालमा हरेक १० वर्षमा यसमा पुनरावलोकनको कुरा उल्लेख गरिएता पनि यो सुविधा लिइरहेको वर्गलाई हटाउने कार्य निकै चुनौतिपूर्ण छ ।
४. सामाजिक , आर्थिक, शैक्षिक रुपमा राष्ट्रिय औसत भन्दा माथि भएको वर्ग, समूह तथा जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व भइसकेको वर्गलाई आरक्षणबाट हटाउँदै उक्त प्रतिशत खुलातर्फ थप गर्दै जानु पर्दछ ।